Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Hanadio tena indray anio an !
Inty sy nday: Hanadio tena indray anio an !
Hitsidika ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) etsy Ampefiloha, hono, anio alatsinainy ny filohampirenena Rajaonarimampianina. Tsy mbola nahazoana vaovao amin’ny antsipirihany aloha ny ho foto-diany eo, fa azo an-tsaina ihany, ny amin’ny hoe raha tsy hanolotra fanampiana sy fitaovana mbamin’ny fanafody dia hitokan-javatra.
Na ho inona na ho inona anefa dia tsy maintsy hanao lahateny indray izy eo, ary tsy hataony ambanin-javatra ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny. Tsy maintsy hanadio tena izy. Tsy maintsy hanamarin-tena. Tsy maintsy hilaza fa “manao ary mikatsaka ny tombontsoan’ny vahoaka ny fitondram-panjakana”. Tsy maintsy hanafoka ny hetsi-bahoaka mikatsaka ny fanovana tena izy ny filoha anio.
Na ho inona na ho ahoana koa anefa teniny dia tsy handaitra amin’ny vahoaka izay efa ela nijaliana sy nampahoriana ary nampahantraina izany. Efa tsy manana ny rariny intsony eo anoloan’ny Malagasy an-tapitrisany izay nampiziogainy ny mangidy sy ny mafaitra nandritra ny efa-taona izay. Tsy hahita fankasitrahana intsony amin’ny vahoaka raha ny filohampirenena ankehitriny satria nampitondra ny mafy an’izany vahoaka izany.
Ny fahamendrehan’ny mpitondra, indrindra fa te hanaporofo sy hanamarina izy fa mbola tiam-bahoaka, dia ny misintaka eo amin’ny fahefam-panjakana, dia voafatotra andraikitra araka ny voasoritry ny lalampanorenana ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (Ceni) hanatanteraka ny fifidianana ao anatin’ny roa volana, aorian’ny f ahitan’ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana (Hcc) fototra ny fahabangan’ny toeran’ny filohampirenena.
Dia amin’izay fotoana izay, hoporofoin’ny tantara eo raha tena mbola tiam-bahoaka na efa naloany ara-pifidianana koa, ankoatry ny efa fandoavan’ny vahoaka amin’izao hetsi-pirenena azy izao izy.